တစ်ဦးကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်ရယူ
ကမ်းလွန် Forex လိုင်စင် FX
တစ်ဦးက Forex လိုင်စင်ရရှိရန် - သင့်လွယ်ကူရှင်းလင်းဖြေရှင်းချက်ဘဏ်ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်း Fast, လွယ်ကူပြီးအလွန်မတတ်နိုင် FROM မှအကျိုး
သငျသညျယခုအခါ Forex သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု / FX အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရရှိရန်နှင့်နိုင်ငံခြားငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏အလွန်အကျိုးအမြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုမှုမှာသတင်းများအရသုံးထရီလီယံဒေါ်လာရှိပါတယ်။ တဦးတည်းငွေကြေးအတွက်ပိုက်ဆံအခြားများအတွက်လဲလှယ်သည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းငွေကြေးနှင့်အခြားအကြားတန်ဖိုးအတက်အကျတစ်အမြတ်အစွန်းအကျိုးတူများအတွက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ကနေဒါဒေါ်လာနှင့်ယူရိုများအတွက်တစ်နှစ်ကုန်သွယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှုန်း 20% ကျော်ရရှိခဲ့ကြသူတွေကိုရှိသည်။
ဒီ FX လိုင်စင်သင်ခန်းစာအတွက်ကဘာလဲ?
ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးအမြတ်အများဆုံး Avenue အနေနဲ့ကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံဆက်ဆက် Forex အတွက်လုပ်ရမည်နိုငျသျောလညျးရေရှည်ဆုရှင် Forex အကျိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရွှေ Rush လက်ထက် မှစ. အဟောင်းကိုစကားကိုစိတ်ထဲထံသို့မရောက်ရ။ "လူတိုင်းကရွေးနဲ့ရေမှုတ်များရောင်းဖို့ကာလဖြစ်၏ရွှေတူးဖော်သောအခါ။ " သင်သို့မဟုတ်သင့်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်နေ့လျှင် $4ထရီလီယံတက်သည်ကုန်သွယ်မှုတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အပေါ်ကော်မရှင်နှင့်အဖိုးအခကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ကာကမ်းလွန် Forex လိုင်စင်နှင့်အတူ။
တစ်ဦးက Forex လိုင်စင်ရယူ၏အကျိုးကျေးဇူးများ:
ကမ္ဘာအဝှမ်းမှ operate နိုင်သလား
သော့ကိုသင်တစ်ဦးတရားဝင်လိုင်စင်ရှိသည်သေချာဖြစ်ရမည်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီကူညီပေးနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Forex ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ သဘာဝကျကျကျနော်တို့ Ethics နှင့်တာဝန်သိ, သင်တရားဝင်လုပ်ကိုင်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ Get နှင့်လိုင်စင်ရစာရင်းကိုင်ထံမှရှေ့နေနှင့်အခွန်အကြံဉာဏ်ကိုလိုင်စင်ရနေတဲ့အသိပညာကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုစောင့်ရှောက်။
Times ကပြောင်းလဲပြီ။ အတော်များများကတရားစီရင်မှုကဒီအမြတ်အစွန်းနယ်ပယ်တွင်လိုင်စင်ရပ်တန့်ပါပြီ။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်ကိုအတုလိုင်စင်ရောင်းကုမ္ပဏီများနှင့်ရေလွှမ်းမိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်သင်တို့၏ FX ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်လုံခြုံရေးအားဖြင့်, သင်တဲ့ professional နဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဖှဲ့အစညျးနဲ့အလုပ်လုပ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများစစ်မှန်သည်နှင့်တရားဝင်နှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်တင်သွင်းခဲ့သည်ဟုယုံကြည်မှုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သောကြောင့်နိုင်ငံခြားတရားစီရင်မှု၌အကြှနျုပျတို့၏တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ကျနော်တို့အနည်းဆုံးတက် paid မြို့တော်နှင့်အတူ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ရယူနိုငျပါသညျ။ ထို့ပြင်ကျွန်တော်တစ်ဦးအတော်လေးတိုတောင်းသောအချိန်အတွင်းမှာလိုင်စင်ရယူနိုငျပါသညျ။ တစ်ဦး Forex လိုင်စင်နှင့်တသားတတရားဝင်သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံပေးရဲ့အကြံပေးချက်ကိုမှဘာသာရပ်, Forex ကုန်သွယ်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Forex လိုင်စင်တဦးတည်းအင်တာနက်ကတဆင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တဦးတည်းလည်းမျိုးစုံနေရာအခက်များဖွင့်လှစ်ဖို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကို virtual ရုံးအစီအစဉ်ကိုဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်တကယ်အရောင်းအသင်၏အကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့်ကောက်ယူနေကြသည်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, သငျသညျအကြားကြားခံပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, သင်၏ကုန်သွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ တစ်ဦး Forex လိုင်စင်ရယူပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါဥပဒေအရလိုအပ်သော်လည်း, ရိုးရှင်းသောကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးအစိုးရအပြောင်းအလဲနဲ့ကြိမ်နှင့်သင့်မြန်နှုန်းပေါ် မူတည်. 2-4 ရက်သတ္တပတ်ကြာပါသည်။
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ Forex လိုင်စင်နှင့်အတူပါဝင်သည်
အဆိုပါ Forex လိုင်စင်များ၏မှတ်ပုံတင်ကြေး
ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် resolution ကို
Office ကိုငှား resolution ကို
န်ထမ်းများအတွက် Nondisclosure သဘောတူညီချက်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံများပါဝင်သော CD ကို
တစ်ဦး Forex အကျိုးဆောင် Start လိုပါသလား?
ဒီနေရာတွင်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကူညီစေခြင်းငှါသတင်းအချက်အလက်ပေးရမယ့်ကျောင်းကသုတေသနဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းများကိုအချို့သည်နေသောခေါင်းစဉ်: အသစ်တစ်ခု Forex စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းဖို့အကောင်းဆုံးတည်နေရာကဘာလဲ? ငါလိုင်စင်အဘယ်မှာရသင့်သလဲ
ကျနော်တို့ Forex လိုင်စင်အပါအဝင်လိုင်စင်ရယူအတွက် client များကူညီကြောင်းရှေ့တက်လို့ပြောသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစာသားသောင်းချီကော်ပိုရေးရှင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး 1906 ကတည်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာခဲ့ကြပြီ။ သငျသညျသတင်းအချက်အလက်များအရတစ်ချိန်ကဒါကြောင့်လာမယ့်ခြေလှမ်းဖုန်းကိုကောက်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိုခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သူကပြောပါတယ်ခံရကျနော်တို့တရားစီရင်မှုငါးခုသီးခြားအမျိုးအစားစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ကလိုင်စင်အဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သင်ရရှိရန်မှတဆင့်ခုန်ပြီးလိုင်စင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရ hoops ရရှိရန်ဘယ်လောက်ခက်ခဲစဉ်းစားမည်အီးမှတဆင့်သူတို့ကိုတစ်ဦးကတံဆိပ်ကပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထံမလိုအပ်လျှင်သင်န်ထမ်း, ထိုအစီရင်ခံလိုအပ်ချက်များကိုလျက်, တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဂုဏ်သတင်းကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သည်စဉ်းစားပါ။
မတိုင်မီကအတွက်မစူးစမျးဖို့ကျနော်တို့ပညာရှိသအလားအလာ Forex ပွဲစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်နိုင်ရန်ကြိုတင်မမေးသင့်ကြောင်းမေးခွန်းများကိုများအတွက်မူဘောင်သတ်မှတ်ထားသင့်တယ်။ ဤတွင်အချို့သောအရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသောခေါင်းစဉ်:
အရာနိုင်ငံတွင်းရှိသင့်စစ်ဆင်ရေးအခြေခံလိမ့်မည်နည်း လူအများစုဟာအွန်လိုင်း brokerage operate ။ ဒါကြောင့်သင်ကအမေရိကန်, ကနေဒါ, ဥရောပသမဂ္ဂ, သြစတြေးလျအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်, ဘေလီဇ်ထဲကအရစ်ကျ operate ။ အချို့သောတရားစီရင်မှုအတွက်လိုင်စင်မရှိဘဲအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအနည်းဆုံးပြော, အခြို့ခိုင်မာသောဒဏ်ငွေနှင့်စီးပွားရေးပိတ်သိမ်းမှုနိုင်ဘူး။
သင်သည်သင်၏ Forex အရစ်ကျစတင်ရန်မည်သို့လျင်မြန်စွာချင်ပါသလဲ?
သင်ဘယ်လိုအရောင်းအ process ချင်ပါသလဲ? (STP, ECN, Hybrid ကို, Market က
client များ secure ထိန်းသိမ်းနည်းဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုဘယ်လိုအရေးကြီးသလဲ
အတော်များများကတရားစီရင်မှုဟာ Forex စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လိမ်လည်မှုကနေအများပြည်သူကာကွယ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးဖို့ရာအရပျစည်းမျဉ်းများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ထားကြပြီ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု CFTC နှင့် NFA ရှိပါတယ်။ ဂျပန်ဥပမာ FSC ဂျပန်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အဆင့်တစ်ဦးကတရားစီရင်မှုအဖြစ်ဤအညှနျး။
level တစ်ခု Forex တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
အဆိုပါအမေရိကန်နှင့်ဂျပန်ဤကဏ္ဍတွင်သို့ကျလိမ့်မည်။ လိုင်စင် secure ဖို့သင် client ကိုရန်ပုံငွေများအပါအဝင်မဟုတ်လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်မြို့တော် $ 20 သန်းရှိသည်သက်သေပြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စည်းမျဉ်းအေဂျင်စီများမှအလွန်တင်းကျပ်သောအစီရင်ခံလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ဖောက်သည်တိုင်ကြားချက်များအားပြိုင်မှုကနေခိုင်မာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ရှိပါတယ်။ ရိုက်တာသတင်းဌာနကသတင်းအေဂျင်စီဘဏ်များ Forex စုံစမ်းစစ်ဆေးနီးပါး $ 20 ဘီလီယံအထိဒဏ်ရိုက်ခဲ့မေလ 2015,6အပေါ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
level B ကို Forex တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
(ASIC ကကြီးကြပ်) ဂရိတ်ဗြိတိန် (အ FCA နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်) နှင့်သြစတြေးလျ၏တရားစီရင်မှုအဆင့်ကို B ကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာဒီထက်တင်းကြပ်အစီရင်ခံလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်နှင့်လျော့နည်းမြို့တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်နေပါသည်။ လိုင်စင်ရယူ $ 35,00- $ 50,000 န်းကျင်ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးရှိနေခြင်းလိုအပ်ပါသည်။ မြို့တော်ဒ $ 100,000 client ကိုသိုက်ကနေဘေးဖယ်လိုသည်။
အဆိုပါ Forex ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာတတိယပါတီများမှသူတို့ကိုရည်ညွှန်းပြီးထက် In-အိမ်သူအိမ်သားအဆင့်သတ်မှတ်သူပြီးစီးခဲ့နေတယ်ဆိုရင်, တဦးတည်းအရည်ငွေသား၏အကြောင်းကို $ 1 သန်းလိုအပ်နေပါသည်။ တတိယပါတီအရောင်းအများအတွက်အသုံးပြုသည်ဆိုပါက, သာအကြောင်းကို $ 100,000 လိုအပ်ပါသည်။
level ကို C Forex တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ Forex အရစ်ကျ client များအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့တရားမျှတတဲ့ငွေပမာဏကိုပူဇော်သည်ဟုအားပြိုင်မှုရှိသည်။ level ကို C တရားစီရင်မှုဆိုက်ပရပ်စ် (CySec နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်), မော်လ်တာ (MFSA ကကြီးကြပ်) နှင့် (FSP အားဖြင့်ကျော် watched) နယူးဇီလန်တို့ပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကဒေသခံရုံးလိုအပ်ပါသည်။ အဲဒီမှာအစီရင်ခံတဲ့အနိမ့်အဆင့်နှင့်အခွန်အတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှိပါသည်။ အစပိုင်းတွင်သာ $ 30,000 လိုင်စင်အမျိုးအစားအားဖြင့်ကွဲပြားသောလိုအပ်ပါသည်။ လိုင်စင်ရရှိရန်စျေးနှုန်းနှင့်အချိန်တို့သည်အဆင့် B ကတည်နေရာအဖြစ်အကြောင်းကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများအတွက် $ 35,000-50,000 အကြောင်းနှင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှေ့တော်၌ထိုစာရွက်စာတမ်းများအစိုးရသည်တစ်ချိန်ကအကြောင်းကိုခြောက်လကြာပါသည်။
အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာမှတ်ပုံတင်နှင့်အီးယူ clients များနှင့်အတူအပြန်အလှန်အခါ, တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ဖွင့်အောက်ကတရားစီရင်မှုအချို့ထက် ပို. လွယ်ကူသည်။
level: D Forex တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
ဤရွေ့ကားတရားစီရင်မှုဗာနူအာနှင့် BVI ပါဝင်သည်။ နှစ်ခုအကြားကျနော်တို့အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲအဖြစ်ဗာနူအာမြင်ကြပြီ။ သငျသညျအလားအလာ clients များပြသခြင်းနှင့် client များနှစ်သိမ့်တစ်ဦးအဆင့်ကိုပေးသည်ရန်သင့် website တွင် post တစ်ခုလိုင်စင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အလိုင်စင်လိုအပ်ချက်ရှိပါဘူး။ မြန်နှုန်းကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအပေါငျးတို့သထဲမှာလှည့်တစ်ချိန်ကနှင့်လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 3-4 လအတွင်းခန့်ကြာမယ့်ရက်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး $ 30,000 အောက်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ထဲမှာ $ 125,000 ၏နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဆဲပိုက်ဆံသုံးခွင့်ရှိသည်အတိုင်းဤအဆုံးစွန်သောငွေပမာဏကိုတစ်ဦးစရိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့အားသာချက်သင်တစ်ဦးလိုင်စင်တစ်ကြိမ်ကသင့်ရဲ့ Forex အရစ်ကျများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့သိပ်လွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်စင်မရှိရင်ကျနော်တို့ကိုသူတို့အထဲကရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်သင် Forex အရစ်ကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ရှိကြ၏ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်ဘဏ်များ၏ငါသိ၏။
level အီး Forex တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
ကျနော်တို့ကဒီအမျိုးအစားထဲမှာကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး Forex အရစ်ကျတရားစီရင်မှု၏ကျန်ရှိသောနေရာပါလိမ့်မယ်။ ဤအတရားစီရင်မှုအတွက် Forex လိုင်စင်မလိုအပ်ပါ။ နေးဗစ်, ဆေးရှဲနှင့် St. ဗင်းဆင့်ကဒီအုပ်စုထဲမှာကျလိမ့်မည်။ အကြောင်းကိုတစ်ပါတ်နဲ့တထောင်ဒေါ်လာငွေအနည်းငယ်၌သင်တို့အသစ်တခု Forex ကုမ္ပဏီ၏မာနထောင်လွှားပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြသည်။ အားသာချက်များကိုအမြန်နှုန်းနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအားနည်းချက်ကတော့လိုင်စင်ထုတ်နှင့်အတူပြုလုပ်သူတို့သည်သင့် Forex လုပ်နေတာသတိထားမိလျှင်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုဘဏ်များ၏အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့ကိုအဘယ်သူ၏ပိုက်ဆံကြောင့်ဘဏ်မှတဆင့်ရွေ့လျားနေသည်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ် Forex န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ထားတဲ့များအတွက် client ကိုလျှင်, ဘဏ်အားပြိုင်မှုများကအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာစသည်တို့ကိုအနည်းငယ်ဘဏ်များတဦးတည်းအကောင့်အဘို့ဤအန္တရာယ်ယူလို, ကြီးမားဒဏ်ငွေရင်ဆိုင်ရအမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ယူရိုငွေအတွက်ရန်ပုံငွေများထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံး, သူတို့ရဲ့လိုင်စင်ဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။
သတငျးကောငျးကုမ္ပဏီရုံ Forex ထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတခြားအမျိုးအစားများများတွင်ပါဝင်နေသည်အထူးသဖြင့်ပါလျှင်တစ်ဦးလိုင်စင်မဲ့ Forex ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အရေအတွက်ကဘဏ်များနေဆဲရှိပါသည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင် Forex စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီနာမတော်၌နှုတ်ကပတ်တော်ကို "Forex" ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြွားအကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ နေဆဲအပြည့်အဝထုတ်ဖော်သုံးနေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သော "နိုင်ငံတကာမှာချဲ့ထွင်ရန်" "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးမျိုး" သို့မဟုတ်အဖြစ်သင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များကိုအလေးပေးသောသင်၏အမျက်နှာသာအတွက်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကမ်းလွန်အရစ်ကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘဏ်အကောင့်ရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ကြပြီ။
ဤကဏ္ဍတွင်, ငါတို့သည်လည်းလတ်ဗီးယားနှင့်အငယျဆုံးသောဒီဂရီ, စတိုးနီးယားနှင့်လစ်သူနေရာပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဦးကိုမှသုံးလခန့်ကြာပါသည်။ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်မျှမျှတတလွယ်ကူသည်, နှင့် may, ဒါမှမဟုတ်မပြုစေခြင်းငှါ, ဒေသတွင်းမှခရီးသွားလိုအပ်သည်။ လတ်ဗီးယားဥရောပသမဂ္ဂ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်, ကအခြားတရားစီရင်မှုအချို့ထက်ယုံကြည်ကိုးစားမှု၏ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဥရောပနှင့်ရုရှားထံမှ clients များအတွက်ဆွဲထုတ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူကြောင့်အံမှတ်ပုံတင်အသစ်သောပွဲစားများအကြားဘုံဖြစ်ပါတယ်။
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအထက်တွင်အရေအတွက်ကို Call နှင့်တစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံဟောပြောလော့။ သူတို့သည်သင့်ရှိစေခြင်းငှါမေးခွန်းများကိုအများအပြားဖြေဆိုနိုင်ပါ။ ယခုရှေ့နေများကကြှနျုပျတို့သညျဤဆိုအပြင်းအထန်တောင်းဆိုဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ you go: ကျနော်တို့ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်အခွန်အကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး။ ကပြောသည်ခံရကြောင်း, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုတက်ရမယ့်လမ်းအတွက်သင့်အားထောက်ခံမှုပူဇော်နှင့်အပြေးနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့သင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ဖွင့်၌သငျကူညီ။ သင်တစ်ဦးဘဏ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသော Forex ပွဲစားနဲ့အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်အဘို့အနောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များဖြစ်စေလိမ့်မည်သူတို့ဖောက်သည်သူတို့ရဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအကောင့်သို့ကြိုးဒါမှမဟုတ်ပွဲစားကိုတိုက်ရိုက်ပေးချေသည်အခြားငွေကြေးအဘို့အဖလှယ်ချင်သောရန်ပုံငွေများရှိသည်။ သင်ကပြန့်နှံ့သို့မဟုတ်သင့်ပွဲစားကိုသင်ပြန့်ပွားတဲ့အပိုင်းအစချေစောင့်ရှောက်လော့။
Forex ကုမ္ပဏီများ 94.2% လိုင်စင်မပါဘဲစတင်ထိုကဲ့သို့သောနေးဗစ်၏ကာရစ်ဘီယံကျွန်းအဖြစ်တည်ရာအရပ် operate ။ (ဆေးရှဲနှင့် St. ဗင်းဆင့်လည်းအသုံးပြုကြသည်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ကြ၏။ )
ဒါဟာအဆင့်ဆင့် AC အခုနှစ်နိုင်ငံများတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ပို 5-10 ကြိမ်ကုန်ကျ, ဒါမှမဟုတ်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်။
အဆင့်ဆင့် AC အဒေသခံတစ်ဦးရုံးရှိနေခြင်းနှင့်ဒေသခံအခွန်လိုအပ်သည်။
ဒါဟာအမျိုးအစားအေဒီအတွက်လိုင်စင်ရရှိရန်6လအတွင်းပျမ်းမျှကြာပါတယ်။
အများပြည်သူအနေဖြင့်ယုံကြည်မှုရရှိရန်အတွက်တစ်ဦးလိုင်စင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အရင်းမြစ်များရှိသည်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ရချင်ကြပါဘူး အကယ်. အချို့သောကောင်းသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဘာမှဒါပေမဲ့စင်ကြယ်သော, ရိုးသားရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိလြှငျ, နှောင့်ရှက်ကြဘူး။ အဆိုပါ Forex စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလုပ်ခံရဖို့ပိုက်ဆံများများရှိပါတယ်။ ဒါဟာဒါကြောင့်တစ်ဦးကာလကြာရှည်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူတစ်ဦးယုံကြည်အကျိုးဆောင်များအတွက်ရေရှည်လုပ်ခံရဖို့ပိုက်ဆံများများရှိပါတယ်အမျိုးအစား: D နှင့်အီးအတွင်းအနိမ့် startup ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီနေရာတွင်ငွေရှာမည်သို့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့ $ 10 အမေရိကန်အဘို့အသငျသညျသငျနှငျ့အတူကိုယ့်ကိုယ် aligned ထားသောကြီးမားသောပွဲစားများသို့မဟုတ်ဘဏ်များ၏တဦးတည်းအနေဖြင့် 8.7885 ယူရိုဝယ်နိုင်ကြောင်းပြောကြပါစို့။ သငျသညျယူရိုလဲလှယ်၌သင်တို့ကို $ 100,000 အမေရိကန်ပေးဖို့လိုလားသူတစ်ဦးဖောက်သည်ရှိသည်။ သငျသညျသူ့ကိုသို့မဟုတ်ယူရို, ဒါမှမဟုတ် 100,000 ယူရိုသူမ၏ $ 87,885 အမေရိကန်တန်ဖိုးရှိကိုပေး၏ အကယ်. သင်သည်မည်သည့်ငွေရှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင်က $ 1000 ရဲ့ပွောဆိုကွကုနျအံ့, တစ်ဦးကော်မရှင်အားသွင်း။ ထို့ကြောင့်သင်ကသူ့ကိုသို့မဟုတ်ယူရိုသူမ၏ $ 99,000 အမေရိကန်တန်ဖိုးရှိပေးပါ။ $ 1 အမေရိကန်သင်သည်သင်၏ client ကိုပေးသောယူရိုအတွက် 87885 မှပမာဏသည်ကြောင်း .99,000 ယူရိုများအတွက် $ 86,936.29 အမေရိကန်များ၏ငွေလဲနှုန်းမှာ။ သင်ရုံတစ် $ 1000 ကော်မရှင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။
Forex brokerage ကြီးထွားအဖြစ်အများဆုံး, သူတို့ သာ. ကြီးမြတ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုရဖို့နိုင်ရန်အတွက်မြင့်မားတဲ့အထိကွင်းဆက်အတွက်လိုင်စင်ရရှိရန်။ အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ရပြီသောငါတို့သည်ဘေလီဇ်၌တည်ကြပါပြီပွဲစားများရှိပါတယ်။
သငျသညျယုံကြည်စိတ်ချရချင်တယ်ဆိုရင်နိဂုံးချုပ်, လိုင်စင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်တစ်ဦးလိုင်စင်ရရှိရန်နှင့် Forex အရစ်ကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ရချင်မှသငျသညျမှနျအရင်းအမြစ်များကိုမရရှိနိုင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, ကျွန်တော်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူနေးဗစ်၌သင်တို့အဘို့အကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဆန်ခါတင်အရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့နှင့်မေးလ် forwarding နှင့်တယ်လီဖုန်းဖြေဆိုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကို virtual ရုံးအစီအစဉ်ကိုဆက်ကပ်။ တနည်းကား, ရိုးသားမှုနှင့်သမာဓိရှိသည့် Forex စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် Forex အရစ်ကျခေါ်ဆိုခနှင့်အတူကျန်းမာ, ရိုးသားလူနေမှုဝင်ငွေနှင့်အတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောလိုလျှင်။
THE အထက်တွင်ရေးသားခြင်းတစ်ခုတည်းသောသတင်းအချက်အလက်များရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီးဥပဒေအရသို့မဟုတ်အခွန်အကြံဉာဏ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။ ယငျးအကြံဉာဏ်, ရှေ့နေသို့မဟုတ်အကောင့်၏လမ်းညွှန်မှုရှာကြာလော့။ အိုင်တီသတင်းအချက်အလက်တွေကတော့လူတိုင်းဟာ OR ခွအေနမြေားကိုညာဘက်ကြောင်းရေးသားခြင်းသည့်အချိန်တွင်တိကျမှုယုံကြည်သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှအာမခံချက်ပေးမယ်လို့လျက်ရှိသည်။